Firefox 98 inosvika neshanduko mumainjini ekutsvaga evamwe vashandisi, kuvandudzwa nezvimwe | Linux Addicts
Firefox 98 inosvika nekuchinja injini yekutsvaga kune vamwe vashandisi, kuvandudzwa uye nezvimwe
Iyo kuburitswa kweiyo vhezheni itsva yeFirefox 98 umo tinogona kuwana yakachinja maitiro pakurodha mafaera- Panzvimbo pekuratidza yambiro usati watanga kudhawunirodha, mafaera zvino anotanga kurodha otomatiki uye chiziviso chinoratidzwa padhibhodhi kana kurodha kwatanga.
Kuburikidza nepaneru, mushandisi anogona chero nguva kugamuchira ruzivo nezve maitiro ekurodha, kuvhura faira rakadhawunirodha panguva yekurodha (chiito chichaitwa kana kurodha kwapera), kana kudzima faira.
Mune zvigadziriso, zvinogoneka kugonesa meseji kune yega yega yekutanga uye tsanangura iyo default application yekuvhura mafaera eimwe mhando.
Imwe shanduko yatinogona kuwana mune iyi vhezheni itsva yeFirefox 98 ndeyekuti akawedzera zviito zvitsva kumenu yemukati inoratidzwa kana uchidzvanya-kurudyi pamafaira ari muchirongwa chekurodha. Semuenzaniso, nekushandisa iyo "Gara uchivhura mafaera akafanana" sarudzo, unogona kubvumira Firefox kuti ivhure otomatiki faira mushure mekurodha kwapera muapp ine chekuita nemhando yefaira pane yako system.
Uyewo unogona kuvhura dhairekitori nemafaira akatorwa, enda kupeji iyo kudhaunirodha kwakatangwa (kwete kudhawunirodha pachayo, asi yekurodha link), kopira chinongedzo, bvisa kutaurwa kwekudhawunirodha kubva munhoroondo yako yekubhurawuza, uye bvisa rondedzero mupani yekurodha.
Kune rimwe divi, zvinomira kune vamwe vashandisi kuti iyo default yekutsvaga injini yakashandurwa. Semuenzaniso, bhurawuza yeChirungu inovaka, pachinzvimbo cheGoogle isu tichakwanisa kuwana DuckDuckGo iyo yave kugoneswa nechisimba nekusarudzika. Panguva imwecheteyo, Google yakaramba iri pakati peinjini dzekutsvaga sechisarudzo uye inogona kuitwa nekusarudzika muzvirongwa.
Chikonzero chekumanikidza injini shanduko default search iko kusakwanisa kuenderera mberi nekupa vatyairi kune mamwe mota kutsvaga nekuda kwekushaikwa kwechibvumirano chepamutemo (mvumo yepamutemo). Chibvumirano neGoogle chekuendesa traffic yekutsvaga chakagara kusvika Nyamavhuvhu 2023 uye chakaunza mari inosvika mazana mana emamiriyoni emadhora pagore, inova ndiyo yakawanda yemari yeMozilla.
Kunze kwezvo, futi isu tinogona kuwana inopindirana pani yakawedzerwa kune zvishandiso zvekuvandudza webhu. Iyo pani inoratidza mireza inokuyambira nezve zvinogona kuitika neCSS zvimiro zveyakasarudzwa HTML element kana peji rese, zvichikubvumidza kuti uone kusapindirana kwebrowser pasina kuyedza peji rakaparadzana mubrowser yega yega.
sudo snap install firefox-98.0.snap
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 98 inosvika nekuchinja injini yekutsvaga kune vamwe vashandisi, kuvandudzwa uye nezvimwe
Bomber: Yemahara Arcade Vhidhiyo Game yeLinux
Cybersecurity: Hardware kuve yakachengeteka zvakanyanya